COVID-19 खोप | Washington State Department of Health
कोभिड-19 विरुद्धको खोप निःशुल्क लगाउन पाइन्छ र यो खोप आप्रवासन स्थिति जे जस्तो भए पनि5वर्ष वा सोभन्दा बढी उमेरका सबै मान्छेहरूका लागि उपलब्ध छ ।
तपाईं COVID-19 विरुद्धको खोप लगाउन चाहनुहुन्छ तर घरबाट निस्कन सक्नुहुन्न ? कृपया यहाँ हेर्नुहोस्
अन्तिम परिमार्जन मे २०, २०२२ मा
मे 20, 2022 – Centers for Disease Control and Prevention (CDC, रोग नियन्त्रण तथा रोकथाम केन्द्र) र Western States Scientific Safety Review Workgroup (पश्चिमी राज्य वैज्ञानिक सुरक्षा समीक्षा कार्यदल) को बुस्टर डोज सम्बन्धी परिमार्जित सिफारिसहरू निम्नानुसार छन्:
5-11 वर्षका बालबालिकालाई Pfizer-BioNTech खोपको प्राथमिक खोप शृङ्खला पूरा गरेको5महिनापछि बुस्टर डोज लगाउनुपर्छ । रोग प्रतिरोधात्मक क्षमता कमजोर भएका बालबालिकालाई उनीहरूको प्राथमिक शृङ्खला पूरा भएको कम्तीमा3महिनापछि बुस्टर डोज लगाउनुपर्छ ।
12 वर्ष र सोभन्दा बढी उमेरका सबै बालबालिकालाई Pfizer वा Moderna खोपको प्राथमिक खोप शृङ्खला पूरा गरेको5महिनापछि वा Johnson & Johnson (J&J) खोपको एकल डोज लगाएको2महिनापछि बुस्टर डोज लगाउनुपर्छ ।
50 वर्ष र सोभन्दा बढी उमेरका सबैले पहिलो बुस्टर डोज लगाएको4महिनापछि दोस्रो बुस्टर डोज लगाउनुपर्छ ।
रोग प्रतिरोधात्मक क्षमता मध्यम वा गम्भीर रूपमा कमजोर भएका 12 वर्ष र सोभन्दा बढी उमेरका मानिसहरूले पहिलो बुस्टर डोज लगाएको4महिनापछि दोस्रो बुस्टर डोज लगाउनुपर्छ ।
J&J खोपको प्राथमिक डोज र बुस्टर डोज लगाएको4महिना पूरा भइसकेका 18 वर्ष वा सोभन्दा बढी उमेरका व्यक्तिहरूले कोभिड-19 विरुद्धको mRNA खोपको दोस्रो बुस्टर डोज लगाउन सक्छन् ।
हामी तपाईंलाई आवश्यक जानकारी दिन चाहन्छौँ। हामी तपाईंलाई अपडेट राख्ने छौँ ताकि तपाईंले आफ्नो स्वास्थ्यको लागि सूचित रहने विकल्प छनोट गर्न सक्नुहुन्छ।
कृपया हाम्रो तथ्य पाना COVID-19 को खोप लगाउन (PDF) हेर्नुहोस्
थप कुरा थाहा पाउनको लागि खोपको तथ्य पृष्ठमा जानुहोस्
बालबालिकाका लागि उपलब्ध कोभिड-19 विरुद्धका खोपका बारेमा जानकारी प्राप्त गर्न Vaccinating Youth (बालबालिका तथा किशोरकिशोरीलाई खोप लगाउने सम्बन्धमा) नामक पेज हेर्नुहोस्
COVID-19 खोप लगाउन मैले के थाहा पाउनु पर्ने हुन्छ?
विद्यालय र बाल हेरचाह
खोक पछिको जीवन
खोप बूस्टर र अतिरिक्त खुराकहरू
मैले कसरी खोप लगाउने?
पत्ता लगाउन र अपोइन्टमेन्ट निर्धारण गर्न खोप लगाउने स्थल मा जानुहोस्।
तपाईं आफ्नो नजिकैको खोप स्थानहरूका लागि आफ्नो जिप कोड 438-829 (GET VAX) मा टेक्स्ट गर्न सक्नुहुन्छ।
के तपाईंको COVID-19 खोपको बारे प्रश्नहरू छन्? के तपाईंलाई खोपको अपोइन्टमेन्ट हेर्न मद्दत चाहिन्छ? 1-800-525-0127 मा COVID-19 सूचना हटलाइनमा फोन गर्नुहोस्, त्यसपछि #थिच्नुहोस्। भाषा सहायता उपलब्ध छ।
यदि तपाईं आफ्नो दोस्रो खोप (Moderna/Spikevax or Pfizer/Comirnaty) खुराको लागि अपोइन्टमेन्टको समय निर्धारण गर्नुभइरहेको छ भने, तपाईं आफ्नो पहिलो खुराकको रूपमा लिनुभएको खोप नै लगाउनु पर्छ।
यदि तपाईं वा तपाईंले चिन्नुहुने कोही घरमा छ भने, एक सुरक्षित अनलाइन फारम (अङ्ग्रेजी) भर्नुहोस्। तपाईंको जवाफले हामीलाई व्यक्तिहरूको उपलब्ध काउन्टी र/वा राज्य मोबाइल खोप टीमहरूसँग सम्पर्कमा रहने अनुमति दिनेछ।
आवास, उपयोगता सहायता, स्वास्थ्य बीमा जस्ता COVID-19 सँग सम्बन्धित समस्याहरूको लागि 211 मा फोन गर्नुहोस् वा wa211.org मा जानुहोस्
थप जानकारीका लागि, COVID-19 खोपहरू हेर्नुहोस्: तथ्य पानाको बारेमा के थाहा पाउने।
के खोप लगाउन म अमेरिकाको नागरिक हुनुपर्दछ?
होइन, तपाईं खोप लगाउनको लागि अमेरिकी नागरिक हुनु पर्दैन। यसको मतलब यो हो कि तपाईंलाई खोप लगाउन सामाजिक सुरक्षा नम्बर वा तपाईंको आप्रवासको स्थिति सहीत अन्य कागजातपत्रहरू चाहिँदैन। केही खोप प्रदायकहरूले सामाजिक सुरक्षा नम्बर सोध्न सक्छन्, तर तपाईंले कुनै पनि एउटा दिन पर्दैन।
तपाईंको बच्चालाई यो खोप लगाउनको लागि एक अमेरिकी नागरिक हुन पर्दैन। स्वास्थ्य सेवा प्रदायकहरूले कसैको आप्रवासन स्थिति सोध्ने छैनन्। अधिकांश स्थितिमा आमाबुबा र अभिभावकहरूले 18 वर्ष मुनिका युवाहरूलाई खोप लगाउन सहमति दिनु पर्नेछ।
Washington State Department of Health (वासिङ्गटन राज्यको स्वास्थ्य विभाग) ले5वर्ष वा सोभन्दा बढी उमेरका सबै मान्छेहरूलाई खोप लगाउन सिफारिस गरेको छ ।
के मैले खोप लगाउन शुल्क तिर्नु पर्नेछ?
पर्दैन। तपाईंलाई तपाईंले खोप लगाउँदा कुनै पनि शुल्क लिनु हुँदैन, वा तपाईंको प्रदायकबाट बिल वा खोप लगाउने सुविधा पाउनु हुनेछ। यो निजी बीमा भएका मानिसहरूमा लागू हुन्छ, Apple Health (Medicaid), Medicare छ, वा जसको बीमा गरिएका छन्।
यदि तपाईंले आफ्नो प्रदायकसँग खोप लगाउनको लागि अन्य सेवाहरू पाउनुहुन्छ भने, तपाईंले कार्यालयमा जानको लागि एक बिल पाउन सक्नुहुन्छ। यसलाई रोक्नको लागि, तपाईं आफ्नो प्रदायकलाई खर्चको बारेमा सोध्न सक्नुहुन्छ।
यदि तपाईंको स्वास्थ्य बीमा छैन भने, प्रदायकहरूले तपाईंसँग खोपको लागि शुल्क लिन सक्दैनन् र COVID-19 खोप कार्यक्रमको आवश्यकताहरू उल्लङ्घन गर्न सक्छन्। यदि तपाईंलाई शुल्क लिईयो भने कृपया covid.vaccine@doh.wa.gov मा इमेल गर्नुहोस्।
यदि तपाईंको स्वास्थ्य बीमा छ र शुल्क लगाइएको छ भने, पहिले आफ्नो बीमा योजनालाई सम्पर्क गर्नुहोस्। यदि यसबाट समस्या समाधान हुँदैन भने, तपाईंले बीमा अधिकारीको कार्यालयमा उजुरी दायर गर्न सक्नुहुन्छ (अङ्ग्रेजी)।
टेलिफोन दोभाषे सेवाको लागि 800-562-6900 मा फोन गर्नुहोस् (100 भन्दा बढी भाषाहरूमा तपाईंलाई बिना शुल्क उपलब्ध छन्)
यदि मसँग स्वास्थ्य बीमा छैन भने के हुन्छ?
यदि तपाईंको बीमा कभरेज छैन भने, आफ्नो प्रदायकलाई बताउनुहोस्। तपाईं अझै पनि नि:शुल्क खोप लगाउन पाउनुहुनेछ।
यदि मलाई खोपको लागि शुल्क लगाइँदैन भने, मलाई किन मेरो स्वास्थ्य बीमाको बारेमा सोधियो?
तपाईंले खोप लगाउनुहुँदा, तपाईंको खोप प्रदायकले तपाईंसँग बीमा कार्ड छ कि भनेर सोध्न सक्छ। यो खाना र औषधि हो जसलाई उनीहरूले तपाईंलाई खोप (खोप व्यवस्था शुल्क) लगाउनको लागि पुर्नभुक्तान पाउन सक्छन्। यदि तपाईंको बीमा छैन भने तपाईंको प्रदायकलाई जानकारी गराउनुहोस्। तपाईंले अझै पनि नि:शुल्क खोप लगाउन सक्नुहुनेछ।
खोप व्यवस्थापन शुल्क के छ र यसको कसले तिर्छ?
खोप व्यवस्थापन शुल्क स्वास्थ्य सेवा प्रदायकले तपाईंलाई खोप लगाउनको लागि लिने एउटा शुल्क हो। यो खोपको लागतबाट भन्दा फरक छ।
संघीय सरकारले खोपको पूरा लागतको लागि भुक्तानी गर्दछ। यदि तपाईंसँग सार्वजनिक वा निजी स्वास्थ्य बीमा छ भने तपाईंको खोप प्रदायकले खोप प्रशासन शुल्को लागि प्रतिपूर्ति गर्ने बिल उनीहरूलाई पठाउन सक्छ।
तपाईंलाई व्यक्तिगत खर्चहरू वा COVID-19 खोप प्रशासन लागतको लागि आफ्नो प्रदायकबाट बिल प्राप्त गर्न शुल्क लगाउनु हुँदैन। यो निजी बीमा भएका मानिसहरूमा लागू हुन्छ, Apple Health (Medicaid), Medicare छ, वा जसको बीमा गरिएका छन्।
हाल कोभिड-19 विरुद्धका कुन कुन खोपहरू उपलब्ध छन् ?
U.S. Food and Drug Administration (FDA, संयुक्त राज्य अमेरिकाको खाद्य तथा औषधि व्यवस्था विभाग) ले तीनवटा खोपलाई आपत्कालीन प्रयोगका लागि अनुमति दिएको वा पूर्ण रूपमा स्वीकृत गरेको छ ।हाल Washington राज्यमा यी खोपहरू दिइँदै छ । कोभिड-19 विरुद्धको Johnson & Johnson खोप लगाएका मान्छेहरूमा विरलै रूपमा Thrombosis with thrombocytopenia syndrome (TTS, थ्रोम्बोसिस सहित थ्रोम्बोसाइटपिनिया सिन्ड्रोम) भनिने समस्या र Guillain-Barré syndrome (GBS, गुलियन बेरी सिन्ड्रोम) नामक रोग देखिने जोखिम भएकाले Johnson & Johnson खोपको साटोPfizer (Comirnaty) र Moderna (Spikevax) खोप लगाउन सिफारिस गरिएको छ ।
Pfizer-BioNTech ले विकास गरेको कोभिड-19 विरुद्धको खोप (Comirnaty):
यो दुई डोज लगाउनु पर्ने खोप हो । यसको पहिलो डोज लगाएको 21 दिनपछि दोस्रो डोज लगाउनु पर्छ । साथै:
रोग प्रतिरोधात्मक क्षमता कमजोर भएका मान्छेहरूले अतिरिक्त (तेस्रो) डोज लगाउनु पर्छ ।
5 वर्ष वा सोभन्दा बढी उमेरका मान्छेहरूले दोस्रो डोज लगाएको मितिबाट कम्तीमा5महिनापछि बुस्टर डोज लगाउनु पर्छ
50 वर्षभन्दा बढी उमेरका व्यक्ति र रोग प्रतिरोधात्मक क्षमता कमजोर भएका केही निश्चित व्यक्तिहरूले (अङ्ग्रेजीमा उपलब्ध छ) अब पहिलो बुस्टर डोज लगाएको कम्तीमा4महिनापछि कोभिड-19 विरुद्धको mRNA खोपको अतिरिक्त बुस्टर डोज लगाउन सक्ने छन्।
तपाईंले दोस्रो डोज लगाएको लगभग दुई हप्ता पूरा नभएसम्म तपाईंलाई पूर्ण रूपमा सुरक्षित भएको मानिँदैन । यो खोप Comirnaty नामअन्तर्गत उपलब्ध छ र 16 वर्ष वा सोभन्दा बढी उमेरका मान्छेहरूका लागि पूर्ण रूपमा स्वीकृत गरिएको छ । साथै, यो खोप5देखि 15 वर्षका बालबालिका तथा किशोकिशोरीहरूमा आप्तकालीन प्रयोगका लागि स्वीकृत गरिएको छ । क्लिनिकल ट्रायलहरूमा गम्भीर प्रकृतिका कुनै पनि अप्रत्याशित असरहरू देखिएका थिएनन् ।
कोभिड-19 विरुद्धको Moderna खोप:
यो दुई डोज लगाउनु पर्ने खोप हो । यसको पहिलो डोज लगाएको 28 दिनपछि दोस्रो डोज लगाउनु पर्छ । साथै:
रोग प्रतिरोधात्मक क्षमता कमजोर भएका मान्छेहरूले यो खोपको अतिरिक्त (तेस्रो) डोज लगाउनु पर्छ ।
18 वर्ष वा सोभन्दा बढी उमेरका मान्छेहरूले दोस्रो डोज लगाएको मितिबाट कम्तीमा5महिनापछि बुस्टर डोज लगाउनु पर्छ
यो खोप 18 वर्ष वा सोभन्दा बढी उमेरका व्यक्तिहरूका लागि पूर्ण रूपमा स्वीकृत गरिएको छ । तपाईंले दोस्रो डोज लगाएको लगभग दुई हप्ता पूरा नभएसम्म तपाईंलाई पूर्ण रूपमा सुरक्षित भएको मानिँदैन । क्लिनिकल ट्रायलहरूमा गम्भीर प्रकृतिका कुनै पनि अप्रत्याशित असरहरू देखिएका थिएनन् ।
कोभिड-19 विरुद्धको Johnson & Johnson – Janssen खोप:
यो खोप 18 वर्ष वा सोभन्दा बढी उमेरका व्यक्तिहरूमा आपत्कालीन प्रयोगका लागि स्वीकृत गरिएको छ । यो एक डोज (एक पटक) लगाउनु पर्ने खोप हो । तपाईंले यो खोप लगाएको एक देखि दुई हप्ता पूरा नभएसम्म तपाईं पूर्ण रूपमा सुरक्षित भएको मानिँदैन । 18 वर्ष र सोभन्दा बढी उमेरका मान्छेहरूले पहिलो डोज लगाएको कम्तीमा दुई महिनापछि बुस्टर डोज लगाउनु पर्छ । क्लिनिकल ट्रायलहरूमा गम्भीर प्रकृतिका कुनै पनि अप्रत्याशित असरहरू देखिएका थिएनन् । Johnson & Johnson खोपको साटो Pfizer र Moderna खोप लगाउन सिफारिस गरिन्छ । Johnson & Johnson को Janssen कोभिड-19 खोप को प्रारम्भिक डोज र बुस्टर डोज लगाएको कम्तीमा4महिना पूरा भइसकेका वयस्क व्यक्तिहरू अब कोभिड-19 विरुद्धको mRNA खोप प्रयोग गरी दोस्रो बुस्टर डोज लगाउन सक्छन्।
यदि म मेरो दोस्रो खुराकको लागि ढिला भएँ भने, के मैले खोप सेरिज लिन थाल्नुपर्छ?
पर्दैन। यदि तपाईं आफ्नो दोस्रो खुराकको लागि ढिलो हुनुभइरहेको छ भने तपाईं खोप सेरिज पुनः सुरु गर्नु पर्दैन।
तपाईंको पहिलो खुराक देखि सिफारिस गरिएका दिनहरू पछि सकेसम्म छिटो दोस्रो खुराक प्राप्त गर्नुहोस् Comirnaty/Pfizer लागि 21 दिन, Spikevax/Moderna लागि 28 दिन)।
दोस्रो खुराक जतिसुकै दिनको अन्तर भए तापनि दुवै खुराक प्राप्त गर्नु महत्त्वपूर्ण छ।
यदि तपाईं रोग प्रतिरोधात्मक क्षमतामा सम्झौता गर्नुहुन्छ र थप खुराक को लागि योग्य हुनुहुन्छ भने, दोस्रो खुराक पछि कम्तीमा पनि 28 दिन पर्खनुपर्छ।
म गर्भवती, स्तनपान वा गर्भवती हुने योजना बनाएको खण्डमा COVID-19 खोप पाउन सक्छु?
सक्नुहुन्छ, डाटाले COVID-19 खोपहरू गर्भावस्थामा सुरक्षित छ भनी देखाउँछ। Centers for Disease Control and Prevention, (CDC, रोग नियन्त्रण तथा रोकथाम केन्द्र), American College of Obstetricians Gynecologists (ACOG, अमेरिकी प्रसूति विशेषज्ञ र स्त्री-रोग विशेषज्ञ कलेज), र Society for Maternal-Fetal Medicine (SMFM, मातृ-भ्रुण औषधि समाज) (अङ्ग्रेजीमा मात्र) गर्भवती, ल्याक्टेटिङ वा गर्भवती हुने योजना बनाएका मानिसहरूका लागि COVID-19 खोप सिफारिस गर्छन्। कुनै-कुनै अध्ययनहरूले देखाएअनुसार यदि तपाईंलाई खोप लगाइएको छ भने, गर्भावस्था र स्तनपानद्वारा तपाईंको बच्चालाई COVID-19 विरुद्ध पनि एन्टिबडी पाउन सकिन्छ। खोप लागेको COVID-19 प्राप्त गर्ने गर्भवती व्यक्तिहरूलाई अपरिपक्व जन्म वा सुत्केरी अवस्थाजस्ता गम्भीर जटिलताहरूको खतरा बढी हुन्छ। यसबाहेक, गर्भवती छँदा COVID-19 हुने मानिसहरूलाई उन्नत जीवन धान्ने र सास फेर्ने नली चाहिने आवश्यकता पर्ने सम्भावना दुईदेखि तीन गुणा बढी हुन्छ।
गर्भावस्था र स्तनपान गराउने अवधिमा कोभिड-19 खोप लगाउने बारे थप स्रोतहरूका लागि, कृपया One Vax, Two Lives वेबसाइटमा राखिएको पछिल्लो जानकारी हेर्नुहोस् ।
नियमित खोपहरू लिइरहेको हुँदा के म COVID-19 खोप लगाउन सक्छु?
हुन्छ। Advisory Committee on Immunization Practices, (ACIP, खोपका अभ्यासहरू बारे सल्लाहकार समिति) ले तिनीहरूको सिफारिसहरूलाई मे 12, 2021 मा परिवर्तन गरेका थियो। तपाईं अब अन्य खोपहरू पाउने समयमा COVID-19 को खोप पाउन सक्नुहुन्छ।
तपाईंले आफ्नो बच्चाको आवश्यक स्कूल खोप (अङ्ग्रेजी मात्र) वा COVID-19 खोपबाट छुट्टाछुट्टै सिफारिस गरिएका अन्य खोपहरूको तालिका बनाउन आवश्यक छैन। COVID-19 खोप अपोइन्टमेन्ट तपाईंको बच्चालाई उसको सिफारिस गरिएका सबै खोपहरूमा समाहित गर्न अर्को अवसर हो।
खोप रेकर्ड कार्ड भनेको के हो?
तपाईंले कोभिड-19 विरुद्धको खोपको पहिलो डोज लगाउँदा तपाईंलाई एउटा कागजी खोप कार्ड दिइन्छ । यो कार्डमा तपईंले कुन प्रकारको खोप लगाउनुभयो (Comirnaty/Pfizer-BioNTech, Spikevax/Moderna, वा Johnson & Johnson) र कुन मितिमा लगाउनुभयो भन्ने कुरा लेखिएको हुन्छ ।
तपाईंले Comirnaty/Pfizer-BioNTech वा Spikevax/Moderna खोप प्राप्त गर्नुभएको छ भने तपाईंले पहिलो डोज लगाउन जाँदा तपाईंको प्रदायकले तपाईंको लागि दोस्रो डोज लगाउने अपोइन्टमेन्ट बुक गर्नु पर्दछ । यो कार्ड आफूसँगै बोक्नुहोस् ताकि तपाईंको खोप प्रदायकले तपाईंको दोस्रो डोजपछि त्यो कार्डमा विवरण भर्न सकोस् ।
तपाईं अतिरिक्त डोज वा बुस्टर डोज लगाउन जाँदै हुनुहुन्छ भने पनि तपाईंले आफ्नो अपोइन्टमेन्टमा आफ्नो खोप रेकर्ड कार्ड लिएर जानु पर्छ । तपाईंको खोप प्रदायकले उक्त कार्डमा डोजको विवरण भरिदिनु हुने छ ।
आफ्नो खोप कार्डको व्यवस्थापन गर्ने सन्दर्भमा विचार गर्नु पर्ने केही उपयोगी सुझावहरू तल दिइएका छन्:
तपाईंको खोप कार्ड खोपको डोज लगाउँदा र खोप लगाइसकेपछि पनि आफैसँग राख्नुहोस् ।
डिजिटल प्रतिलिपि चाहिएमा सजिलै उपलब्ध होस् भन्नका लागि तपाईंको कार्डको अगाडि र पछाडिको भागको फोटो खिचेर राख्नुहोस् ।
उक्त फोटो पछि सजिलै भेट्टाउन सकियोस् भन्ने प्रयोजनका लागि उक्त फोटो आफैलाई इमेल गर्नुहोस्, एल्बम बनाउनुहोस् वा उक्त फोटोमा ट्याग हाल्नुहोस् ।
यदि तपाईं आफूसँग फोटोकपी बोक्न चाहनुहुन्छ भने उक्त कार्डको फोटोकपी गर्नुहोस् ।
तपाईंले आफ्नो अपोइन्टमेन्टमा आफ्नो खोप कार्ड ल्याउनुभएन भने पनि तपाईं दोस्रो डोज लगाउन पाउनुहुन्छ । तपाईंले पहिलो डोज जुन ब्रान्डको खोप लगाउनुभएको थियो दोस्रो डोज पनि सोही ब्रान्डो खोप पाउनुहुन्छ भन्ने कुरा सुनिश्चित गर्न आफ्ना प्रदायकलाई आफ्नो पहिलो डोजको ब्रान्ड हेरिदिन अनुरोध गर्नुहोस् । तपाईंले आफ्नो खोप कार्ड हराउनुभयो भने MyIR (My Immunization Registry (मेरो खोपसम्बन्धी रेजिस्ट्री)) मा लग इन गरेर (यो लिंकमा क्लिक गर्दा खुल्ने पेज अङ्ग्रेजी भाषामा मात्र उपलब्ध छ) आफूले लगाएको कोभिड-19 विरुद्धको खोपको रेकर्ड खोज्नुहोस् अनि स्क्रिनमा भएको जानकारीको स्क्रिनसट लिनुहोस् वा फोटो खिच्नुहोस् । यदि तपाईंसँग खाता छैन भने तपाईं जुनसुकै बेला MyIR मा खाता बनाउन सक्नुहुन्छ ।
कृपया ध्यान दिनुहोस् कि MyIR मार्फत तपाईंको रेकर्डहरूको प्रमाणीकरण तत्काल नहुन सक्छ र यो प्लेटफर्म हाल अङ्ग्रेजी भाषामा मात्र उपलब्ध छ । तपाईंसँग MyIRmobile वा खोपको रेकर्डसम्बन्धी प्रश्नहरू छन् भने तपाईं Department of Health COVID-19 (स्वास्थ्य विभागको कोभिड-19) हटलाइन नम्बर 833-VAX-HELP फोन गरेर प्रत्यक्ष रूपमा सहायता प्राप्त गर्न वा waiisrecords@doh.wa.gov मा इमेल पठाएर सम्पर्क गर्न सक्नुहुन्छ ।
मैले किन COVID-19 खोप लगाउनु पर्छ?
COVID-19 खोप प्राप्त गर्ने तपाईंको विकल्प हो, तर यस महामारीको अन्त्य गर्न हामीलाई खोप लगाउन सकेसम्म धेरै मानिसहरूको आवश्यकता पर्दछ। COVID-19 भाइरस फैलिन कठिन हुन्छ जब समुदायमा धेरै मानिसहरू रोग प्रतिरोधात्मक हुन्छन् – खोप वा हालैको संक्रमणद्वारा। हाम्रो खोप दर जति उच्च हुन्छ, हाम्रो संक्रमण दर त्यति नै कम हुन्छ।
COVID-19 खोपले तपाईंलाई धेरै तरिकामा जोगाउन सक्छ:
यदि तपाईंले COVID-19 पाउनुभयो भने यसले गम्भीर रूपमा बिरामी हुने सम्भावना कम गर्छ
पूर्ण खोप लगाउँदा तपाईंको अस्पतालमा भर्ना हुने सम्भावना कम हुन्छ र COVID-19 बाट तपाईंको मृत्यु हुने जोखिम कम हुन्छ
खोपले समुदायमा व्यक्तिहरूको सङ्ख्या बढाउँदछ जो सुरक्षित छन्, जसले रोग फैलाउन गाह्रो बनाउँछ
विशेषज्ञहरूले अरूलाई भाइरस फैलाउनबाट रोक्नको लागि खोपको क्षमताको अध्ययन गर्न जारी राख्छन्।
एकपटक तपाईलाई पूर्ण खोप लगाएपछि, तपाईलाई अझै पनि COVID-19 लाग्ने सम्भावना हुन्छ, तर यो खोप नभएको भन्दा धेरै सानो सम्भावना हो।
खोप नलगाएका मानिसहरूले अझै भाइरसले समाउन र अन्य मानिसहरूलाई फैलाउन सक्छन्। केही मानिसहरूले मेडिलकल कारणको लागि खोप पाउन सक्दैनन् र यसले तिनीहरूलाई विशेष गरी COVID-19 मा कमजोर गराउँछ। यदि तपाईंले अझै खोप लगाउनुभएको छैन भने, तपाईं अस्पताल भर्ना हुन वा COVID-19 भेरिएन्ट(अङ्ग्रेजी मात्र) लागि मर्न उच्च जोखिममा हुनुहुन्छ।खोप लगाउनाले तपाईं, तपाईंको परिवार, छिमेकी र समुदायलाई सुरक्षित रहन मद्दत गर्दछ।
यदि अधिकांश मानिसहरू रोग लागेर बाँचिहरेका छन् भने मेले किन COVID-19 को खोप लगाउने?
मृत्यु हुनु COVID-19 को जोखिमले मात्र होइन। COVID-19 लागेका धेरै मानिसहरूलाई मात्र मध्यम लक्षणहरू छन्। यद्यपि, यो भाइरस एकदमै अप्रत्याशित छ र हामीलाई थाहा छ, केही COVID-19 भेरिएन्टहरूले (अङ्ग्रेजी मात्र) तपाईंलाई वास्तवमै बिरामी बनाउने सम्भावना बढी हुन्छ। कोही-कोही मानिसहरू असाध्यै बिरामी पर्न सक्छन् वा COVID-19 को कारण मर्न सक्छन्, यहाँसम्म कि दीर्घकालीन स्वास्थ्य समस्या नभएका युवाहरूसमेत मर्न सक्छन्। “COVID लङ होल्स" भनेर चिनिने अरू कतिपयलाई भने महिनौंसम्म चल्ने र तिनीहरूको जीवनस्तरमा असर गर्ने लक्षणहरू देखिन सक्छन्। हामीलाई अझै पनि COVID-19 को सबै दीर्घकालीन असरहरू थाहा छैन किनभने यो एक नयाँ भाइरस हो। खोप लगाउनु भाइरस विरुद्ध हाम्रो सबैभन्दा राम्रो सुरक्षा हो। तपाईं युवा र स्वस्थ हुनुभएता पनि तपाईंले COVID-19 खोप लगाउनु पर्दछ।
COVID-19 भेरिएन्ट के के हुन्?
एक व्यक्तिबाट अर्को व्यक्तिमा फैलि भाइरसका स्वरुप बदल्छन् (परिवर्तन हुन्छन्)। ‘भेरिएन्ट' भाइरसको स्वरुप बदलेकको प्रकार हो। केही खालका भेरिएन्टहरू समयसँगै हराउँछन् र केही समुदायमा निरन्तर रुपले फैलिन्छन्।
Centers for Disease Control and Prevention (CDC) केन्द्रहरूले सम्बन्धित भेरिएन्टहरू पहिचान गरेका छन्। हालै, केही भेरिएन्टहरू सम्बन्धित छन् किनभने तिनीहरू छिटो र थप सजिलोसँग फैलिन्छन्, जसले गर्दा COVID-19 को संक्रमण बढी हुन्छ।
के COVID-19 खोपले भेरिएन्ट तनाव विरुद्ध काम गर्दछ?
तपाईंले खोप लगाउनुभयो भने भाइरसको सङ्क्रमण दर घट्नुका साथै विभिन्न भेरिएन्टका भाइरस सर्न पनि कम हुन्छ । साथै, खोप लगाएका खण्डमा हालसम्म पत्ता लागेका सबै भेरिएन्टका भाइरसको सङ्क्रमणका कारण अस्पतालमा भर्ना हुनु पर्ने र मृत्यु हुने जोखिम निकै कम हुन्छ ।
खोप लगाएका केही व्यक्तिहरू अझै पनि भेरिएन्टको तनावबाट संक्रमित हुन सक्छन् तर अनुसन्धानले देखाएअनुसार तिनीहरूमा हल्का लक्षणहरू देखा पर्न सक्छन्। तपाईंले विभिन्न भेरियन्टहरूबाट अधिकतम सुरक्षा प्राप्त गर्न सिफारिस गरिएका सबै डोज लगाउनु महत्त्वपूर्ण हुन्छ ।
तपाईं, तपाईंका प्रियजनहरू र तपाईंको समुदायको सुरक्षा गर्ने सर्वोत्तम तरिका खोप हो। उच्च खोपले भाइरसहरूको फैलावट कम गर्नेछ र नयाँ भाइरसहरू देखा पर्नदेखि रोक्न मद्दत गर्नेछ।
हामीले खोपहरू सुरक्षित छन् भनेर कसरी थाहा पाउने?
कोभिड-19 खोपहरू सुरक्षित रहेको सुनिश्चित गर्न, Centers for Disease Control and Prevention (CDC, रोग नियन्त्रण तथा रोकथाम केन्द्र) ले खोपको सुरक्षा निगरानी गर्ने देशको क्षमतालाई विस्तार गरेर सबल बनायो । फलस्वरूप, खोप सुरक्षा विशेषज्ञहरूले कोभिड-19 खोप क्लिनिकल परीक्षणहरूमा नदेखिएका हुन सक्ने समस्याहरू निगरानी गर्न र पत्ता लगाउन सक्छन् ।
Johnson & Johnson का सम्बन्धमा के भइरहेको छ ?
Washington State Department of Health (DOH, वासिङ्गटन राज्यको स्वास्थ्य विभाग) ले डिसेम्बर 2021 मा कोभिड-19 विरुद्धको Johnson & Johnson (J&J) खोप (एक डोज मात्र लगाउनु पर्ने खोप) को साटो mRNA खोप (Pfizer-BioNTech वा Moderna) लगाउन सिफारिस गरेको थियो ।
नयाँ डेटाले J&J खोप लगाएका मान्छेहरूमा विरलै रूपमा दुईवटा स्वास्थ्य समस्या देखिने जोखिम हुने कुरा देखाएपछि Centers for Disease Control and Prevention ( ,CDCरोग नियन्त्रण तथा रोकथाम केन्द्र) ले संशोधित मार्गदर्शनहरू जारी गरेसँगै यो अपडेट जारी गरिएको हो ।
यी समस्याहरू कोभिड-19 विरुद्धको J&J सँग मात्र सम्बन्धित छन्, Pfizer वा Moderna खोपसँग सम्बन्धित छैनन् । हाल कोभिड-19 विरुद्धको खोप लगाउन चाहने मान्छेहरूलाई DOH ले Moderna र Pfizer खोप लगाउन सिफारिस गरेको छ । तपाईं Moderna वा Pfizer खोप लगाउन सक्नुहुन्न वा इच्छुक हुनुहुन्न भने चाहिँ तपाईं J&J खोप लगाउन सक्नुहुन्छ । तपाईंका लागि उपलब्ध विभिन्न खोपहरूका बारेमा कुरा गर्न कृपया आफ्नो स्वास्थ्य सेवा प्रदायकलाई सम्पर्क गर्नुहोस् ।
तपाईंले विगत तीन हप्तामा कोभिड-19 विरुद्धको J&J खोप लगाउनुभएको छ वा J&J खोप लगाउने सोचमा हुनुहुन्छ भने TTS का कारण रगत जम्ने समस्याका लक्षणहरूका बारेमा जानिराख्नुहोस् । TTS का कारण बेसरी टाउको दुख्ने, पेट दुख्ने, खुट्टा दुख्ने र/वा सास फेर्न गाह्रो हुने जस्ता लक्षणहरू देखिन सक्छन् । तपाईंमा यीमध्ये कुनै पनि लक्षण देखिएमा कृपया तुरून्तै चिकित्सा स्याहार प्राप्त गर्नुहोस् ।
कोभिड-19 विरुद्धको कुनै पनि खोप लगाइसकेपछि पहिलो हप्ताको अवधिमा ज्वरो आउने, टाउको दुख्ने, थकाइ लाग्ने र जोर्नी/मांसपेशी दुख्ने लगायतका हल्का देखि मध्यम लक्षणहरू देखिनु भनेको सामान्य हो । यी साइड इफेक्टहरू सामान्यतया खोप लगाएको तीन दिनभित्र देखिन थाल्छन् र केही दिनसम्म मात्र देखिन्छन् ।
खोप FDA स्वीकार गर्दा भन्नुको मतलब के हो?
पूर्ण अनुमोदनका लागि, FDA आपतकालीन प्रयोग प्राधिकरण भन्दा लामो तथ्याङ्कको समीक्षा गर्दछ । खोपलाई पूर्ण स्वीकृति दिन तथ्याङ्कले खोप उत्पादनमा उच्च स्तरको सुरक्षा, प्रभावकारिता र गुणस्तर नियन्त्रण लाई देखाउनुपर्छ।
आपतकालीन प्रयोग प्राधिकरण (EUA) ले FDA लाई पूर्ण लाइसेन्स अगाडि आपतकालीन अवस्थाको घोषणा गरिएको समयमा उत्पाद उपलब्ध गराउन अनुमति दिन्छ। र EUA को उद्देश्य मानिसहरूले तथ्याङ्कको दीर्घकालीन विश्लेषण गर्नुअघि जीवन बचाउने खोपहरू प्राप्त गर्न सक्छन् भन्ने सुनिश्चित गर्नु हो। तथापि, EUA - को लागि अझै पनि केही समयको लागि मात्र क्लिनिकल सम्बन्धी तथ्याङ्कहरूको विस्तृत पुनरावलोकन गर्नु आवश्यक छ। FDA द्वारा प्रदान गरिएको कुनै EUA Scientific Safety Review Workgroup (वैज्ञानिक सुरक्षा समीक्षा कार्यसमूहद्वारा)थप Western States Pact (पश्चिमी राज्यहरू) (अङ्ग्रेजी मात्र) को भागको रूपमा थप परीक्षण गरिन्छ।
Western States Pact भनेको के हो?
अक्टोबर 2020, मा वासिङ्गटनले FDA द्वारा अधिकृत भएपछि COVID-19 खोपहरूको सुरक्षा र प्रभावकारिताको पुनरावलोकन गर्न पश्चिमी राज्यहरू वैज्ञानिक सुरक्षा समीक्षा कार्य समूह (पश्चिमी राज्य समझौता) सिर्जना गर्न ओरेगन, नेभाडा, कोलोराडो र क्यालिफोर्नियामा सम्मिलित भए। यो कार्य समूहले खोप सुरक्षा वरिपरि विशेषज्ञ समीक्षाको अर्को तह प्रदान गर्दछ।
यस प्यानलमा सबै सदस्य राष्ट्रहरूद्वारा नियुक्त विशेषज्ञहरू र रोग प्रतिरोध क्षमता र जनस्वास्थ्यसम्बन्धी विशेषज्ञता भएका राष्ट्रीय मान्यता प्राप्त वैज्ञानिकहरू समावेश छन्। जब FDA आपतकालीन प्रयोगको लागि खोप को अनुमति दिन्छ, प्यानलले संघीय समीक्षाहरूसँग सबै सार्वजनिक रूपमा उपलब्ध तथ्याङ्कको समीक्षा गर्दछ, र प्रतिवेदन पेश गर्दछ। यो प्रक्रिया हाल वासिङ्गटन राज्यमा उपलब्ध तीनवटा खोपका लागि र भविष्यमा Emergency Use Authorization (EUA) प्रदान गरिने सबै COVID-19 खोपहरूका लागि भएको थियो। Western States Scientific Safety Review Group निष्कर्षहरू पढ्नुहोस्:
Pfizer-BioNTech COVID-19 खोप (PDF) (अङ्ग्रेजी)
Moderna COVID-19-खोप (PDF) (अङ्ग्रेजी)
Johnson & Johnson-Janssen COVID-19 खोप (PDF) (अङ्ग्रेजी)
COVID-19 खोपले कसरी मेरो शरीरमा काम गर्दछ?
खोपहरूले मेरो शरीरमा कसरी काम गर्दछमा (अङ्ग्रेजी) भिडियो हेर्नुहोस्
mRNA खोपहरू (Pfizer र Moderna COVID-19 खोपहरू)
उपलब्ध भएका दुई खोपहरूलाई मेसेन्जर RNA (mRNA) खोपहरू भनिन्छ।
mRNA खोपहरूले तपाईंलाई कोरोनाभाइरस स्पाइक प्रोटीनको हानी नगर्ने टुक्रा बनाउन सिकाउँछ। तपाईंको रोग प्रतिरोध प्रणालीले प्रोटिन नभएको र तपाईंको शरीर एन्टीबडी बनाउन थालेको देख्छ। यदि तपाईं भविष्यमा संक्रमित हुनुभयो भने यी एन्टीबडीहरूले कसरी COVID-19 सँग लड्ने भनेर सम्झन्छन्। तपाईंले खोप लगाएपछि बिरामी नभइकन COVID-19 मा प्रतिरोध क्षमता निर्माण गर्नुहुन्छ। यसले एकपटक आफ्नो काम गरेपछि mRNA तुरुन्तै टुक्रिन्छ र केही दिनमै शरीर सफा भएर जान्छ।
Viral Vector खोपहरू (Johnson & Johnson COVID-19 खोप)
COVID-19 खोपहरू मध्ये एकलाई viral Vector खोप भनिन्छ
Vector खोपहरू भाइरस (COVID-19 हुने एक भन्दा विभिन्न भाइरसहरू) को एक कमजोर भेरिएन्टका साथ निर्मित छन्। यी खोपहरूले तपाईंको कोशिकाहरूलाई कोरोनाभाइरस स्पाइक प्रोटिनको हानिरहित टुक्रा बनाउन सिकाउँछ। तपाईंको रोग प्रतिरोधात्मक प्रणालीले प्रोटिनसँग कुनै सम्बन्ध नभएको देख्छ र एन्टिबडी बनाउन थाल्छ। तपाईंको शरीरले तपाईंलाई बिरामी नबनाइकन COVID-19 को भावी संक्रमणबाट कसरी जोगाउने भन्ने कुरा सिक्छ।
हामीसँग भएको Vector खोप एक खुराक हो। सामान्यतया खुराक पछि अधिकतम सुरक्षा पाउन झन्डै दुई हप्ता लाग्छ।
कहिलेकाहीँ खोप लगाउँदा हल्का ज्वरो वा रुघाखोकीजस्ता लक्षणहरू देखा पर्न सक्छन् तर ती हानिकारक हुँदैनन्।
थप जानकारीका लागि, यी संसाधनहरू हेर्नुहोस्: COVID-19 खोपहरूको स्न्यापशट र COVID-19 खोपहरू: कसरी थाहा पाउने.
समुदायका पर्याप्त मानिसहरूले कोरोनाभाइरस विरुद्ध लड्न सक्दा यो कतै पनि जान सक्दैन। यसको अर्थ, हामी फैलिनदेखि छिटो रोक्न सक्छौं र यो महामारीको अन्त्य गर्न अलि नजिक जान सक्छौं।
COVID-19 खोपहरू कसरी बने?
यस छोटो भिडियोले COVID खोपहरू कसरी बने (अङ्ग्रेजी मात्र) उल्लेख गर्दछ।
mRNA खोप के हो?
म्यासेन्जर RNA वा mRNA खोप नयाँ प्रकारको खोप हो। mRNA खोपले तपाईंको कोशिकाहरूलाई “स्पाइक प्रोटीन”-को हानिरहित टुक्रा कसरी बनाउने भनेर सिकाउँछ। स्पाइक प्रोटीन भनेको तपाईंले कोरोनाभाइरसको सतहमा देख्नु भएको कुरा हो। तपाईंको रोग प्रतिरोधात्मक प्रणालीले प्रोटिन त्यहाँ नभएको देख्छ र यसले तपाईंको शरीरप्रति रोग प्रतिरोधात्मक क्षमता बढाउन र एन्टिबडी बनाउन थाल्छ। हामीले "स्वाभाविक रूपमा" COVID-19 संक्रमण हुँदा पनि यस्तै हुन्छ। यसले एकपटक आफ्नो काम गरेपछि mRNA तुरुन्तै टुक्रिन्छ र केही दिनमै शरीर सफा भएर जान्छ।
विगतमा हामीले अन्य प्रकारका चिकित्सा तथा पशु चिकित्सा उपचारको लागि mRNA प्रयोग गरेका भए तापनि यस विधिको प्रयोग गरेर खोप बनाउनु विज्ञानमा ठूलो उछाल हो र यसको मतलब भविष्यमा खोपहरू सजिलै बनाउन सकिन्छ।
तपाईंले mRNA खोपहरूले काम गर्दछ CDC को वेबसाइट (अङ्ग्रेजी मात्र) मा हेर्न सक्नुहुन्छ।
भाइरल Vector खोप के हो?
यस प्रकारको खोपले तपाईंको कोशिकालाई निर्देशन दिने अर्कै भाइरस (“vector”) को कमजोर भेरिएन्ट प्रयोग गर्छ। Vector एउटा कोशिकामा प्रवेश गर्छ र COVID-19 स्पाइक प्रोटिनको हानिरहित टुक्रा बनाउन कोशिका मेसिनरीको प्रयोग गर्छ। कोशिकाले आफ्नो सतहमा स्पाइक प्रोटिन देखाउँछ र तपाईंको रोग प्रतिरोधात्मक प्रणालीले त्यहाँ कुनै सम्बन्ध नभएको देख्छ। तपाईंको रोग प्रतिरोधात्मक प्रणालीले एन्टिबडी बनाउन थाल्छ र संक्रमण ठानेका अन्य रोग प्रतिरोधात्मक कोशिकाहरूलाई सक्रिय पार्न सङ्घर्ष गर्न थाल्नेछ। तपाईंको शरीरले तपाईंलाई बिरामी नबनाइकन COVID-19 को भावी संक्रमणबाट कसरी जोगाउने भन्ने कुरा सिक्छ।
खोपहरूमा समावेश गरिएका सामग्रीहरू के के हुन्?
COVID-19 खोपहरूमा सामग्रीहरू खोपहरूको लागि धेरै विशिष्ट छन्। यसमा mRNA का सक्रिय अवयवहरू वा परिमार्जित एडेनोभाइरसका साथसाथै बोसो, नुन र चिनी जस्ता अन्य तत्त्वहरू हुन्छन् जसले सक्रिय तत्त्वलाई जोगाउँछ, शरीरमा राम्रोसँग काम गर्न मद्दत गर्छ र भण्डारण र यातायातको समयमा खोपलाई सुरक्षित राख्न मद्दत गर्छ।
Pfizer, Moderna, र Johnson and Johnson खोप हरूमा मानव कोशिका (भ्रूण कोशिकालगायत), COVID-19 भाइरस, लाटेकस, संरक्षणकर्ता वा सुँगुरको मासु वा जिलेटिनलगायत अन्य कुनै जनावरका उत्पादनहरू समावेश गरिएका हुँदैनन्। खोपहरू अण्डामा उमार्दैनन् र यसमा कुनै पनि अण्डा उत्पादन समावेश गरिएका हुँदैनन्।
सामग्रीहरूबारे थप जानकारीको लागि यो प्रश्न र उत्तर; Children's Hospital of Philadelphia वेबपेज (अङ्ग्रेजीमा मात्र) हेर्नुहोस्। तपाईंले सामग्रीहरू Pfizer (अङ्ग्रेजी मात्र), Moderna (अङ्ग्रेजी मात्र), रJohnson & Johnson (अङ्ग्रेजी मात्र) तथ्य पानाहरूमा पनि पाउन सक्नुहुन्छ
के Johnson & Johnson खोपमा भ्रूण तन्तु समावेश हुन्छ?
Johnson & Johnson COVID-19 को खोप धेरै अन्य खोपहरू जस्तै एउटै प्रविधिको उपयोग गरी बनाइएको हो। यो भ्रूण वा भ्रूण कोशिकाहरू को भागहरू समावेश गर्दैन। प्रयोगशालामा 35 वर्षअघि भएको वैकल्पिक गर्भपतनबाट सुरु भएका कोशिकाहरूको प्रतिलिपि बनाउन एउटा खोप बनाइन्छ। त्यसबेलादेखि प्रयोगशालामा यी खोपहरूको लागि कोशिका लाइनहरू राखिएका छन् र भ्रूणको कोशिकाको छेउमा यी खोपहरू बनाउन कुनै स्रोत प्रयोग गरिएको छैन। यो केही मानिसहरूको लागि नयाँ जानकारी हुन सक्छ। यद्यपि, चिकनपक्स, रुबेला, र हेपेटाइटिस एको लागि खोपहरू पनि त्यस्तै गरी बनाइन्छ।
के COVID-19 खोपले बाँझोपन गराउँछ?
त्यहाँ कुनै वैज्ञानिक प्रमाण छैन कि खोपहरू बाँझोपन वा नपुंसकता को कारण हो। तपाईंको शरीरमा खोप प्रवेश गरेपछि यसले तपाईंको प्रतिरक्षा प्रणालीका साथ कोरोनाभाइरससँग लड्ने एन्टिबडीहरू बनाउन काम गर्छ। यो प्रक्रिया तपाईंको प्रजनन अंगहरूसँग हस्तक्षेप गर्दैन।
Centers for Disease Control and Prevention (CDC), American College of Obstetricians and Gynecologists (ACOG) (अङ्ग्रेजी मात्र), र Society for Maternal-Fetal Medicine (SMFM) (अङ्ग्रेजी) ले गर्भवती भएका, स्तनपान गराईराखेका वा गर्भवती हुने योजना बनाईराखेका व्यक्तिहरूको लागि COVID-19 खोप लगाउन सिफारिस गर्दछ। COVID-19 को विरुद्ध खोप लगाएका धेरै मानिसहरूसँग गर्भवती भइसकेका छन् वा स्वस्थ बच्चाहरूलाई जन्म दिएका छन्।
हाले कुने पनि प्रमाणले COVID-19 खोपहरू सहीतको कुनै पनि खोपले पुरुषहरूमा बाँझोपनको समस्याहरू देखाउँदैन। mRNA COVID-19 खोप (उदाहरणको लागि Pfizer-BioNTech वा Moderna) लगाउने एक भर्खरको सानो अध्ययनले 45 स्वास्थ्य पुरुष (अङ्ग्रेजी) को खोप लगाउनु अघि वा पछिको शुक्राणुको विशेषताहरू, गुणस्तर र चाल आदि हेरेको थियो। खोजकर्ताहरूले खोप लगाएपछि यी शुक्राणुको विशेषताहरूमा कुनै विशेष परिवर्तहरू पत्ता लगाएनन्।
रोगबाट हुने ज्वरो स्वस्थ पुरुषहरूमा शुक्राणुमा छोटो समयको कमीका साथ जोडिएको छ। यद्यपि ज्वरो COVID-19 खोप को अस्थायी साइड इफेक्ट हुन सक्छ, त्यहाँ कोभिड खोप पछि शुक्राणु निर्माणमा असर गर्ने कुनै वर्तमान प्रमाण छैन।
थप जानकारीको लागि CDC को बच्चा जन्माउन चाहने व्यक्तिहरूको लागि COVID-19 खपोपहरूको जानकारी (अङ्ग्रेजी मात्र) हेर्नुहोस्। तपाईंले खोपहरूको सम्बन्धमा तथ्यहरूको लागि CDC COVID-19 खोपका वेबपृष्ठ (अङ्ग्रेजी मात्र) पनि हेर्न सक्नुहुन्छ।
खोप लगाईसके पछि कस्ता खालका लक्षणहरू सामान्य हुन्छन्?
अन्य नियमित खोपजस्तै सबैभन्दा सामान्य साइड इफेक्ट पाखुरा सुन्निने, थकाइ लाग्ने, टाउको दुख्ने र मांसपेशी दुख्ने हुन्छ।
यी लक्षणहरू खोपले काम गरिरहेको सङ्केत हो। Pfizer र Moderna परीक्षणहरूमा यी साइड इफेक्टहरू खोप प्राप्त गरेको दुई दिनभित्र बारम्बार हुने गर्थे र लगभग एक दिनसम्म रहन्थ्यो। पहिलो खुराकभन्दा दोस्रो खुराकपछि साइड इफेक्ट बढी हुने गरेको थियो। Johnson & Johnson क्लिनिकल परीक्षणहरूमा यसको साइड इफेक्टहरू औसतन एक देखि दुई दिनसम्म रह्यो।
यी तीनैवटा खोपका लागि 55 वर्ष नाघेका मानिसहरूले जवानहरूको तुलनामा साइड इफेक्टबारे रिपोर्ट गर्ने सम्भावना कम थियो।
तपाईं अनलाइन वा सामाजिक सञ्जालमा असत्य साइड इफेक्टको बारेमा केही अफवाहहरू देख्न सक्नुहुन्छ। तपाईंले त्यस दाबीको स्रोत जाँच्नुभएको कुनै साइड इफेक्टको बारेमा दाबी देख्नुभएको छ कि भनेर सुनिश्चित गर्नुहोस्।
यदि म COVID-19 खोप लगाएपछि बीमारी भएँ भने के हुन्छ?
अन्य नियमित खोपजस्तै COVID-19 खोप मा पनि सामान्यत: साइड इफेक्ट हुन्छ , जस्तै, खोप लगाएपछि हात, ज्वरो, टाउको दुख्ने वा थकान हुने। खोपले काम गरिरहेका संकेतहरू छन्। कोभिड-19 खोप लगाएपछि हुन सक्ने साइड इफेक्टहरूका बारेमा थप जानकारी प्राप्त गर्नुहोस् ।
यदि तपाईं खोप लगाउनु भएपछि बीमारी पर्नुहुन्छ भने तपाईंले प्रतिकूल घटनाको Vaccine Adverse Event Reporting System (VAERS, खोप प्रतिकूल घटना रिपोर्टि सिस्टम प्रणाली) (अङ्ग्रेजी मात्र) मा रिपोर्ट गर्नुपर्छ। एक "प्रतिकूल घटना" खोप लगाएपछि हुने कुनै स्वास्थ्य समस्या वा साइड इफेक्ट हो। VAERS को बारेमा थप जानाकरीको लागि, “VAERS के हो” हेर्नुहुन्छ तल
VAERS के हो?
रोग नियन्त्रण र रोकथाम केन्द्रहरु (CDC) and the खाद्य र औषधि प्रशासन (FDA) र को नेतृत्वमा प्रारम्भिक चेतावनी प्रणाली हो। VAERS एक खोपसँग सम्बन्धित हुन सक्छ कि समस्याहरू पत्ता लगाउन मद्दत गर्न सक्छ।
जो कोही (स्वास्थ्य सेवा प्रदायक, बिरामी, स्याहारकर्ता) ले VAERS मा सम्भावित प्रतिकूल प्रतिक्रियाहरू रिपोर्ट गर्न सक्छन् (अङ्ग्रेजी मात्र).
त्यहाँ प्रणाली को सीमाहरू छन्। VAERS रिपोर्टको अर्थ खोपले प्रतिक्रिया वा नतिजा निम्त्यायो भन्ने होइन। यसको मतलब खोप पहिले नै भएको थियो।
VAERS भनेको वैज्ञानिकहरूलाई सम्भाव्य समस्याको अनुसन्धान गर्नुपर्ने जानकारीको लहड वा कारणहरू पत्ता लगाउन मद्दत गर्नु हो। यो खोपको पुष्टि गरिएको नतिजाको सूची होइन।
VAERS को लागि रिपोर्ट गर्दा तपाईंले CDC र FDA लाई स्वास्थ्यसम्बन्धी सम्भाव्य चिन्ताहरू पत्ता लगाउन र खोपहरू सुरक्षित छन् कि छैनन् पक्का गर्न मद्दत गर्नुहुन्छ। कुनै समस्या आयो भने तिनीहरूले कदम चाल्नेछन् र स्वास्थ्य सेवा उपलब्ध गराउनेहरूलाई सम्भाव्य समस्याहरूबारे जानकारी दिनेछन्।
के म COVID-19 खोप लगाउन सक्छु यदि म COVID-19 भएको छु?
हो, Advisory Committee on Immunization(ACIP, प्रतिरक्षा अभ्यास सम्बन्धी सल्लाहकार समिती) ले खोप पाएका COVID-19 भएका जोकोहीलाई सिफारिस गर्दछ।
तथ्याङ्कले देखाएअनुसार संक्रमित भएको 90 दिनमा COVID-19 बाट पुनः संक्रमित हुनु असामान्य कुरा हो, त्यसैले तपाईंलाई केही सुरक्षा (प्राकृतिक प्रतिरक्षा भनिन्छ) हुन सक्छ। तथापि, प्राकृतिक रोग प्रतिरोध क्षमता कति लामो समयसम्म रहिरहन सक्छ भन्ने कुरा हामीलाई थाहा छैन।
हाल COVID-19 भएकाहरूले राम्रो महसुस नगरेसम्म र छुट्टिएर बस्ने समय समाप्त नभएसम्म खोप लगाउन पर्खनुपर्छ।
हालै COVID-19 सँग सम्पर्क भएकाहरूले पनि अन्य व्यक्तिहरूबाट सुरक्षितसाथ अलग्गै राख्न सकिन्छ भने आफ्नो संगराधित अवधिपछि सम्म पर्खनुपर्छ। यदि तिनीहरूले अरूलाई संक्रमित गर्न सक्ने खतरा धेरै छ भने, रोग फैलिनदेखि रोक्न तिनीहरूलाई संक्रमण अवधिको दौडान खोप लगाउन सकिन्छ।
आइसोलेसन र क्वारेन्टाइन सम्बन्धी दिशानिर्देशहरूका लागि कृपया हाम्रो कोभिड-19 का लागि आइसोलेसन र क्वारेन्टाइन पृष्ठ हेर्नुहोस् ।
यदि मलाई पहिले कुनै खोपको एलर्जिको कुनै प्रतिक्रिया भएका छन् भने के मैले COVID-19 खोप लगाउन सक्छु?
यो खोप गम्भीर एलर्जी प्रतिक्रियाको ज्ञात इतिहास भएका मानिसहरूलाई दिइनु हुँदैन, जस्तै एनाफिलेक्सिस, mRNA वा भाइरल vector खोपको अघिल्लो खुराक, वा Pfizer-BioNTech/Comirnaty (अङ्ग्रेजी मात्र), Moderna/Spikevax(अङ्ग्रेजी मात्र), वा Johnson & Johnson–Janssen (अङ्ग्रेजी मात्र) COVID-19 खोपको कुनै पनि घटकलाई।
अन्य खोप वा सुई उपचारप्रति गम्भीर एलर्जी भएका मानिसहरूले अझै पनि खोप पाउन सक्छन्। तथापि, प्रदायकले जोखिमको मूल्याङ्कन गर्नुपर्छ र सम्भाव्य खतराहरूबारे सल्लाह गर्नुपर्छ। यदि बिरामीले खोप लिने निर्णय गर्छ भने, तत्काल कुनै पनि प्रतिक्रियाको निगरानी गर्न प्रदायकले 30 मिनेटको लागि तिनीहरूको निरीक्षण गर्नुपर्छ।
Advisory Committee on Immunization Practices (ACIP) ले प्रदायकहरूले सबै बिरामीहरूलाई खोप पाएपछि कम्तीमा पनि 15 मिनेटसम्म एलर्जीको प्रतिक्रियाको लागि अनुगमन गर्न सल्लाह दिएको छ। थप जानकारीको लागि ACIP को mRNA खोपहरूको अन्तरिम क्लिनिकल विचार (अङ्ग्रेजी) हेर्नुहोस्
के COVID-19 खोप आवश्यक छ?
यो तपाईंको छनौट हुनेछ कि COVID-19को लागि खोप लिने हो, तर केही रोजगारदाताहरू, कलेजहरू, र विश्वविद्यालयहरूलाई यसको आवश्यकता छ।
राज्य एजेन्सीहरू, स्वास्थ्य सेवा प्रदायकहरू, शैक्षिक संस्था र बाल स्याहार संस्थाका कर्मचारीहरू र ठेकेदारहरूका लागिगभर्नरको खोप आवश्यकताहरूको बारेमा जानकारी।
वासिङ्गटनलाई हाल COVID-19 को खोप चाहिन्छ:
स्वास्थ्य स्याहार कर्मचारी र दीर्घकालीन स्याहार गर्ने कर्मचारीहरू (अङ्ग्रेजी मात्र)
क्याबिनेट एजेन्सीको राज्यस्तरीय कर्मचारीहरू (अङ्ग्रेजी मात्र)
शैक्षिक संस्थानहरूमा कर्मचारीहरू (अङ्ग्रेजी मात्र), निम्न सहीत:
निजी K-12 स्कुल, सार्वजनिक K-12 स्कूल डिस्ट्रिक, चार्टर स्कुल र शैक्षिक सेवा जिल्ला (राज्य आदिवासी शिक्षा कम्प्याक्ट स्कूल वा विद्यार्थीहरूलाई यो आदेश लागू हुँदैन)।
बाल स्याहार र प्रारम्भिक शिक्षा प्रदायकहरू जो धेरै घरहरू बाट बच्चाहरू को सेवा, र
उच्च शिक्षामा कर्मचारीहरू।
यी कर्मचारीहरूलाई अक्टोबर18, 2021 सम्ममा COVID-19 (खोप श्रृङ्खला समाप्त गरे पछि कम्तिमा दुई हप्ता) लाई पूर्ण खोप लगाउन आवश्यक छ। यस आवश्यकतामा ठेकेदार, स्वयंसेवकहरू र यी सेटिङहरूमा काम गर्ने अन्य कुनै पनि पद समावेश छ।
यदि तपाईं यी समूहहरूमध्ये एउटामा हुनुहुन्छ वा तपाईंको रोजगारदाता वा स्कूलमा COVID-19 खोप चाहिन्छ भने, के गर्ने भनी पत्ता लगाउन आफ्नो मानव संसाधन विभाग, रोजगारदाता वा स्कूलसँग कुरा गर्नुहोस्। स्वास्थ्य विभाग रोजगारदाता वा कलेज/विश्वविद्यालयको नीतिमा संलग्न छैन ।
यो खोपले तपाईं र तपाईं वरपरका अन्य व्यक्तिहरूलाई COVID-19 प्राप्त गर्नबाट जोगाउन मद्दत गर्नेछ र हामी तपाईंलाई आफ्ना चिकित्सक वा क्लिनिकसँग लाभहरूबारे कुरा गर्न प्रोत्साहन दिन्छौं।
K-12 कर्मचारीहरूको लागि COVID-19 खोप कोन लगाउनु आवश्यक छ?
2021 अगस्ट 18 मा, गभर्नर Inslee ले सबै सार्वजनिक तथा निजी K–12 स्कूलका कर्मचारीलाई COVID-19 विरुद्ध पूर्ण खोप लगाउने वा 2021 अक्टोबर 18 सम्म धार्मिक वा चिकित्सा छुट पाउने निर्देशिका सार्वजनिक गरेका थिए।
आदेश सबै शैक्षिक संस्थाहरूमा कर्मचारीहरू (अङ्ग्रेजी मात्र) मा कार्न्यान्वयन हुन्छ, निम्न कुरा सहीत:
थप जानाकरीको लागि K-12 स्कूलको कर्मचारीहरूको लागि आवश्यक COVID-19: बारम्बार सोधिने प्रश्नहरू (PDF) (अङ्ग्रेजी) हेर्नुहोस् (Office of Superintendent of Public Instruction)।
म कसरी खोपको आवश्यकताहरूबाट मुक्त पाउन सक्छु?
यदि तपाईंको रोजगारदाता वा कलेज/विश्वविद्यालयलाई COVID-19 को खोप चाहिन्छ, वा तपाईं प्रति सरकार खोप पाउन आवश्यक छ। Jay Inslee9अगस्टको घोषणा (अङ्ग्रेजी) वा 18 अगस्टको घोषणा (अङ्ग्रेजी), तपाईं आफ्नो नियोक्ता वा कलेज/विश्वविद्यालय सम्पर्क गर्नुपर्छ कि तिनीहरूले कसरी खोप को प्रमाण सङ्कलन, यदि तिनीहरूले एक अप्ट-आउट नीति छ भने, र तपाईं के गर्न आवश्यक हुनेछ अप्ट-आउट गर्न। स्वास्थ्य विभाग रोजगारदाता वा कलेज/विश्वविद्यालयको नीतिमा संलग्न छैन ।
तपाईंलाई COVID-19 खोपको लागि Department of Health (DOH, स्वास्थ्य विभाग) बाट छुट रूप प्राप्त गर्न आवश्यक छैन। COVID-19 खोपको लागि DOH सँग छुट रूप छैन वासिङ्गटन राज्य Certificate of Exemption (COE, राज्य छुटको प्रमाणपत्र) केवल आमाबुवा /अभिभावकहरूका लागि हो जो K-12 स्कूल, प्रिस्कूल वा बाल हेरचाहमा बालबालिकाका लागि आवश्यक प्रतिरक्षाबाट आफ्नो बच्चालाई मुक्त गर्न चाहन्छन्। हालै, वासिङ्गटनले बालबालिकाहरूलाई स्कूल वा बाल हेरचाहमा भाग लिनको लागि COVID-19 खोपको आवश्यकता पर्दैन, त्यसैले यसलाई छुटको प्रमाणपत्र (COE) मा समावेश गरिएको छैन।
18 वर्ष मुनिका मानिसहरूले खोप लगाउन सक्छन्?
अँ ।5वर्ष वा सोभन्दा बढी उमेरका बालबालिका तथा किशोरकिशोरीहरू Pfizer-BioNTech खोप लगाउन सक्छन् । 17 वर्ष मुनिका बालबालिका तथा किशोरकिशोरीहरू कानुनी रूपमा बन्धन मुक्त नभएसम्म उनीहरूले खोप लगाउनका लागि आमाबुवा वा अभिभावक को मन्जुरी लिनु पर्ने (यो लिंकमा क्लिक गर्दा खुल्ने पेज अङ्ग्रेजी भाषामा मात्र उपलब्ध छ) हुन सक्छ । थप जानकारीका लागि Vaccinating Youth (बालबालिका तथा किशोरकिशोरीलाई खोप लगाउने सम्बन्धमा) नामक हाम्रो वेबपेजमा जानुहोस् ।
खोप लगाउने क्लिनिकमा सम्पर्क गरेर आमाबुवाको मन्जुरी वा कानुनी रूपमा बन्धन मुक्त भएको प्रमाण देखाउने सम्बन्धमा तोकिएका मापदण्डहरूका बारेमा सोध्नुहोस् ।
कोभिड-19 विरुद्धका खोप लगाएका विद्यार्थी मात्र K-12 स्कुलमा प्रवेश गर्न पाउने नियम लागू गरिएको छ?
K-12 स्कुलका विद्यार्थीहरूले अनिवार्य खोप लगाउनुपर्ने नियम बनाउने अधिकार Revised Code of Washington (RCW, वासिङ्टनको संशोधित नियमावली) 28A.210.140 (अङ्ग्रेजी भाषामा उपलब्ध छ) Department of Health (स्वास्थ्य विभाग) सँग नभई Washington State Board of Health (वासिङ्टन राज्य स्वास्थ्य बोर्ड) (अङ्ग्रेजी भाषामा उपलब्ध छ) सँग हुन्छ। अहिले स्कुल वा बालस्याहार केन्द्रका लागि COVID-19 विरुद्धको खोप लगाउन अनिवार्य गरिएको छैन।
मेरो बच्चाले उनीहरूको COVID-19 खोप लगाउँदा अन्य खोपहरू लगाउन सक्छन्?
मानिसहरू अब एकै दिन सहित अन्य खोपहरू को १४ दिन भित्र COVID-19 खोप लगाउन सक्छन्।
COVID-19 महामारीलाई ध्यानमा राखेर 2021-2022 सालको स्कूल वर्षका लागि स्कूल इम्युनाइजेसन आवश्यकतामा कुनै लचकता आउने हो कि?
यदि त्यहाँ स्कूल प्रतोरोध क्षमताको आवश्यतकताहरूमा कुनै परिवर्तहरू हुनुपर्छ कि पर्दैन भनेर स्वास्थ्यको राज्य बोर्डले निर्धारण गर्दछ। यो अवस्थामा स्कूलको खोपको आवश्यकताहरू उस्तै रहनेछन्। बच्चाहरूले पहिलो दिन स्कूलमा उपस्थित हुन सक्नुभन्दा पहिले खोप को आवश्यकताहरूलाई पूरा गर्न आवश्यक छ।
पूर्ण रूपमा खोप लगाइएको मतलब के हो?
कुनै पनि व्यक्तिले निजको कोभिड-19 खोपको प्राथमिक शृङ्खलामा सिफारिस गरिएका सबै डोजहरू लगाएको2हप्तापछि खोपको पूरा मात्रा लगाएको मानिन्छ ।
यदि कुनै व्यक्तिले प्राथमिक शृङ्खलामा सिफारिस गरिएका सबै डोजहरू र योग्य हुँदा एउटा बुस्टर डोज लगाएको खण्डमा कोभिड-19 खोपमा अप टु डेट रहेको मानिन्छ ।
म अब के गर्नुपर्छ कि म पूरै खोप लगाएको छु?
एकपटक खोपको पूरा मात्रा लगाएपछि, तपाईंल निम्न गर्नुपर्छ:
तपाईं योग्य भएपछि आफ्नो बुस्टर डोज लगाउन आफ्नो पात्रोमा समयतालिका बनाउनुहोस् वा रिमाइन्डर राख्नुहोस्: तपाईंले Pfizer वा Moderna कोभिड-19 खोपको दोस्रो डोज प्राप्त गरेको5महिनापछि वा Johnson & Johnson (J&J) कोभिड-19 खोप लगाएको2महिनापछि बुस्टर डोज लगाउनुपर्छ । यसले तपाईंलाई तपाईंले लगाउनुपर्ने कोभिड-19 खोपहरूमा "अप टु डेट" बनाउँछ र अधिकतम सम्भावित सुरक्षा प्रदान गर्दछ । थप जानकारीका लागि कृपया हाम्रो "भ्याक्सिन बुस्टर डोज" सम्बन्धी पृष्ठ हेर्नुहोस् ।
आफ्नो खोपको कागजातलाई जन्मदर्ताको प्रमाणपत्र वा अन्य आधिकारिक कागजात जस्तै मान्नुहोस् ! यसको फोटो खिच्नुहोस् र त्यसपछि यसलाई घरैमा राख्नुहोस् । भविष्यमा, तपाईंले आफूले कोभिड-19 खोप लगाएको प्रमाण दिनुपर्ने हुन सक्छ ।
तपाईंसँग खोप लगाएको एक आधिकारिक प्रमाण राख्नुहोस् । Department of Health (स्वास्थ्य विभाग) को कोभिड-19 खोप प्रमाणीकरण पृष्ठमा दिइएका उदाहरणहरू हेर्नुहोस् ।
आफ्नो स्मार्टफोनमा WA Verify (वासिङ्टनको प्रमाणीकरण गर्ने एप) हाल्नुहोस् ।
यदि मैले पूर्ण रूपमा COVID-19 को खोप लगाएको छु भने, के मैले अझै अन्य सावधानीहरू गर्नुपर्ने हुन्छ?
तपाईंले खोपको पूरा मात्रा लगाउनुभएको भए पनि, तपाईंले अझै निम्न गर्नुपर्छ:
अधिकतम सम्भावित सुरक्षाका लागि आफ्नो बुस्टर डोज लगाएर "अप टु डेट" हुनुपर्छ ।
कोठामा बस्दाका नियमहरू पालना गर्नुपर्छ । नगर, काउन्टी, व्यवसाय, कार्यक्रम र निश्चित केन्द्रहरूले अझै पनि मास्क लगाउन वा खोप लगाएको/नेगेटिभ नतिजाको प्रमाण आवश्यक गर्न सक्छन् ।
कोभिड-19 लक्षणहरू देखिएका भएमा परीक्षण गराउनुहोस् ।
यदिन तपाईं कोभिड-19 को सम्पर्कमा आउनुभएको हुन सक्छ भने आफूलाई सचेत गराउन र तपाईंको परीक्षणको नतिजा पोजिटिभ आएमा अरूलाई अज्ञात रूपमा सचेत गराउन आफ्नो स्मार्टफोनमा WA Notify (वासिङ्टनमा सङ्क्रमणको सूचना दिने एप) स्थापना गर्नुहोस्। WA Notify पूर्ण रूपमा गोप्य हुन्छ र यसले तपाईं को हुनुहुन्छ भन्ने थाहा हुँदैन वा तपाईं कहाँ जानुहुन्छ भनेर ट्र्याक गर्दैन ।
अधिकतम सम्भावित सुरक्षाका लागि भीडभाड हुने सबै सार्वजनिक बन्द स्थानहरूमा राम्रोसँग फिट हुने मास्क लगाउनुहोस् ।
Centers for Disease Control and Prevention (CDC, रोग नियन्त्रण तथा रोकथाम केन्द्र) र स्वास्थ्य विभागका यात्रा सम्बन्धी सिफारिसहरू पालना गर्नुहोस् ।
कोभिड-19 को सम्पर्कमा आएको सम्भावना भएपछि आवश्यक सावधानीका उपायहरू अपनाउनुहोस्:
यदि तपाईंले बुस्टर खोप लगाउनुभएको छैन र तपाईंले आफ्नो प्राथमिक खोप शृङ्खला पूरा गरेको5महिना वा सोभन्दा बढी समय (Moderna/Pfizer) वा2महिना (Johnson & Johnson) भन्दा बढी भएको छ भने, सम्पर्कमा आएपछि5दिनसम्म क्वारेन्टाइनमा बस्नुहोस् र त्यसपछि थप5दिनसम्म कडाइका साथ मास्क प्रयोग गर्नुहोस् ।
यदि तपाईंले आफ्नो बुस्टर खोप लगाउनुभएको छ भने, तपाईं सम्पर्कमा आएपछि क्वारेन्टाइनमा बस्नु आवश्यक छैन, तर तपाईंले सम्पर्कमा आएपछि 10 दिनसम्म मास्क लगाउनुपर्छ ।
खोप लगाइएको र खोप नलगाइएका विभिन्न घरहरूका मानिसहरू एक अर्काको भ्रमण गर्न सक्छन्?
यो भर पर्छ। यदि कुनै घरमा गम्भीर COVID-19 रोगको उच्च जोखिममा व्यक्तिहरू छन् भने (अङ्ग्रेजी मात्र), तपाईंले बाहिर वा घरभित्र झ्याल खुल्ला राखेर जानुपर्छ, राम्रोसँग फिट गरिएको मास्क लगाएर र शारीरिक दूरी कायम राख्नुपर्छ (कम्तीमा6फिट /2मिटर)।
यदि घरमा उच्च जोखिम भएका मानिसहरू छैनन् भने मास्क नलगाइकन सडकमा वा निजी घरभित्रको सेटिङमा जाँदा COVID-19 फैलिने खतरा कम हुन्छ।
यदि मेरो घरका केही मानिसहरूलाई पूर्ण खोप लगाइएको छ र कसै-कसैलाई खोप लगाइएको छैन भने नि?
यदि तपाईंको घरका केही मानिसहरूलाई मात्र पूर्ण खोप लगाइएको छ भने, तपाईंले आफ्नो घरपरिवारलाई खोप नलगाएझैं सावधानी अपनाउनुपर्छ। यसको अर्थ तपाईंले मास्क लगाउनुपर्छ र अन्य आंशिक वा खोप नलगाएका घरका मानिसहरूसँग भ्रमण गर्दा6फिट (2 मिटर) को अतिरिक्त रहनुपर्छ - र सम्भव भएमा जमघटबाट बच्नुपर्छ ।
तपाईंको परिवारमा कोही पनि गम्भीर COVID-19 रोगको खतरामा नपरेसम्म तपाईं पूर्णतया खोप लगाइएको परिवारका मानिसहरूसँग भेट्न सक्नुहुन्छ।
के म एक ठूलो समूहसँग भेला हुन सक्छु यदि हामी सबै खोपिएका छौं?
खोपको पूरा मात्रा लगाएर आफ्नो बुस्टर खोप पनि लगाएका मानिसहरू कोभिड-19 विरुद्ध राम्रोसँग सुरक्षित हुन्छन् । खोपको पूरा मात्रा लगाएका व्यक्तिहरू भेला हुँदा पनि अरूभन्दा सुरक्षित हुन्छन् ।
कृपया ध्यान दिनुहोस्, केही व्यक्तिहरूलाई कम जोखिमयुक्त सेटिङहरूमा भेला हुँदा पनि सहज महसुस नहुन सक्छ । अरूले अझै पनि अँगालो हाल्न र हात मिलाउन नचाहन सक्छन् । र त्यो पनि ठिकै छ । सबैजना नौलो सामान्य अवस्थामा समायोजन गर्दैछन् र हामी सबै केवल सुरक्षित रहन र हाम्रा प्रियजनहरूलाई बचाउन चाहन्छौँ ।
के मैले खोपको प्रमाण देखाउनु पर्नेछ?
तपाईंले निश्चित क्षेत्र, व्यवसाय वा निश्चित कार्यक्रमहरूमा कोभिड-19 विरुद्ध खोप लगाएको प्रमाण दिनुपर्ने हुन सक्छ ।
त्यसैले आफ्नो खोपको कागजातलाई जन्म दर्ताको प्रमाणपत्र वा अन्य आधिकारिक कागजात जस्तै मान्नुहोस्! यसको फोटो खिच्नुहोस् र त्यसपछि यसलाई घरैमा राख्नुहोस्। खोप कार्ड र खोप रेकर्डहरूको बारेमा थप कुरा पढ्नुहोस्।
यदि म कोभिड-19 विरुद्धका खोपहरूमा 'अप टु डेट' छैन भने के हुन्छ ?
यदि तपाईं आफ्नो कोभिड-19 विरुद्धका खोपहरूमा 'अप टु डेट' हुनुहुन्न भने निम्न गर्नुहोस्:
आफू नजिकको निःशुल्क कोभिड-19 विरुद्ध खोप लगाउने ठाउँ खोज्नुहोस् !
भीडभाड हुने सबै सार्वजनिक बन्द स्थानहरूमा राम्रोसँग फिट हुने मास्क लगाउने बारेमा सोच्नुहोस् ।
यदि तपाईंमा लक्षणहरू देखिइरहेको छ भने कोभिड-19 को परीक्षण गराउनुहोस् ।
यदि तपाईं कोभिड-19 को सम्पर्कमा आउनुभएको छ भने,5दिनसम्म क्वारेन्टाइनमा बस्नुहोस् र त्यसपछि थप5दिनसम्म कडाइका साथ मास्क प्रयोग गर्नुहोस् । सम्पर्कमा आएको5दिनमा परीक्षण गराउन पनि नभुल्नुहोस् ।
यदि तपाईं यात्रा गर्नुहुन्छ भने, यात्रा गर्नु अघि र पछि कोभिड-19 को परीक्षण गराउनुहोस् ।
तपाईं कोभिड-19 को सम्पर्कमा आउनुभएको हुन सक्छ भने तपाईंलाई सचेत गराउन र तपाईंको परीक्षणको नतिजा पोजिटिभ आएमा अरूलाई अज्ञात रूपमा सचेत गराउन आफ्नो स्मार्टफोनमा WA Notify स्थापना गर्नुहोस् । WA Notify पूर्ण रूपमा गोप्य हुन्छ र यसले तपाईं को हुनुहुन्छ भन्ने थाहा हुँदैन वा तपाईं कहाँ जानुहुन्छ भनेर ट्र्याक गर्दैन ।
खोप लगाए पछि के म अझै COVID-19 बाट बीमारी हुन सक्छु?
यसको सम्भावना छैन, तर त्यहाँ कही सम्भावना छ। खोपहरू निकै प्रभावकारी छन्, तर 100% भने छैनन्। यदि तपाईंलाई COVID-19 जस्तो लक्षणहरू भएमा (अङ्ग्रेजी मात्र), तपाईं अन्य व्यक्तिहरू टाढा रहनुपर्छ र स्वास्थ्य स्याहार प्रदायकलाई सम्पर्क गर्नुपर्छ। तिनीहरूले COVID-19 परीक्षण गर्न सिफारिस गर्न सक्छन्।
कोभिड-19 को परीक्षणसम्बन्धी जानकारीका लागि कृपया परीक्षणसम्बन्धी जानकारी
के मैले खोप लगाएपछि COVID-19 फैलाउन सक्छु?
खोपको पूरा मात्रा र बुस्टर डोज पनि लगाएका मानिसहरूलाई सानो अनुपातमा सङ्क्रमण हुन्छ । तथापि, कोभिड-19 विरुद्ध खोपको पूरा मात्रा लगाएका र कोभिड-19 को सङ्क्रमण भएका मानिसहरूबाट अरूमा भाइरस सर्न सक्छ ।
यदि म COVID-19 को सम्पर्कमा आएँ भने मैले के गर्नुपर्छ ?
यदि तपाईंले खोपको पूरा मात्रा लगाउनुभएको छ र तपाईंले आफ्नो बुस्टर डोज पनि लगाउनुभएको छ (अप टु डेट) भने, तपाईं क्वारेन्टाइनमा बस्नुपर्दैन, तर तपाईंले सम्पर्कमा आएको 10 दिनसम्म मास्क लगाउनुपर्छ र सम्पर्कमा आएपछि5दिनमा कोभिड-19 को परीक्षण गराउनुपर्छ । यदि तपाईंको प्राथमिक खोप शृङ्खला पूरा गरेको6महिना वा सोभन्दा बढी (Moderna/Pfizer) वा2महिना वा सोभन्दा बढी (Johnson & Johnson) भइसकेको छ र तपाईंले अहिलेसम्म बुस्टर डोज लगाउनुभएको छैन भने, तपाईंले5दिनसम्म क्वारेन्टाइनमा बस्नुपर्छ र थप5दिनसम्म कडाइका साथ मास्क प्रयोग गर्नुपर्छ । खोप लगाए पनि नलगाए पनि, सबैले सम्पर्कमा आएको5दिनमा परीक्षण गराउनुपर्छ ।
म कसरी COVID-19 को वरिपरि तनाव र चिन्ता व्यवस्थापन गर्न सक्छु?
हामी बुझ्छौं कि महामारी दुबै तपाईंको शारीरिक र मानसिक स्वास्थ्य लाई असर गर्न सक्छ। तिमी एक्लो छैनौं। वासिङ्गटनका थुप्रै मानिसहरूले आर्थिक र जागिरको समस्या, स्कूल बन्द हुने, सामाजिक अलगाव, स्वास्थ्यसम्बन्धी चिन्ता, दुःख र नोक्सानी जस्ता अन्य धेरै कुराहरूले गर्दा तनाव र चिन्ताको सामना गरिरहेका छन्। यसले सार्वजनिक गतिविधिहरूमा फर्कदा आउन सक्ने थप चिन्ता समावेश गर्दछ।
यहाँ तपाईंको तनाव र चिन्ता व्यवस्थापनमा मद्दत गर्न सक्ने केही संसाधनहरू छन्:
सहायता र COVID सँग सम्बन्धित चिन्ताहरूको लागि Washington Listens लाइन 833-681-0211 लाई सम्पर्क गर्नुहोस्
यदि तपाईं जोखिममा हुनुहुन्छ भने:
आत्महत्या रोकथाम लाइफलाइन: 800-273-8255 (150 भाषाहरूमा भाषा सहायतटा)
जोखिमको सम्बन्धहरू: 866-427-4747
Teen Link (अङ्ग्रेजी मात्र): 866-833-6546 मा फोन गर्नुहोस् वा टेक्स्ट गर्नुहोस् (भाषा सहायता उपलब्ध छ)
स्वास्थ र मानसिक स्वास्थ्य बारे सुन्न, थाहा पाउन र सम्बन्धित रहन दिमागी स्थिति को उपयोग गर्नुहोस्।
थप संसाधनहरूको लागि हाम्रो मानसिक स्वास्थ (अङ्ग्रेजीमा मात्र) मा जानुहोस्।
एक COVID-19 अतिरिक्त खुराक र एक बूस्टरमा के फरक छ?
थप खुराक (जसलाई तेस्रो खुराक पनि भनिन्छ) प्रतिरक्षा प्रणाली कमजोर भएका मानिसहरूको लागि हो। कहिलेकाहीँ प्रतिरक्षा प्रणाली कमी भएका मानिसहरूले पहिलो पटक पूर्णतया खोप लगाउँदा पर्याप्त सुरक्षा निर्माण गर्दैनन्। जब यो हुन्छ, खोपको अर्को खुराक प्राप्त गर्दा उनीहरूलाई रोग विरुद्ध थप सुरक्षा निर्माण गर्न मद्दत गर्दछ।
बूस्टरले खोपको खुराकलाई जनाउँछ जुन खोप पछि पर्याप्त सुरक्षा निर्माण गर्ने कसैलाई दिइन्छ, तर त्यसपछि समय बित्दै जाँदा त्यो सुरक्षा घट्यो (यसलाई रोग प्रतिरोधात्मक क्षमता भनिन्छ)। यही कारणले गर्दा तपाईं हरेक 10 वर्षमा टेटानस बूस्टरको लागि आउनुभएको हो किनभने समय बित्दै जाँदा तपाईंको बाल्यकालको टिटानस खोप श्रृंखलाबाट सुरक्षा कम हुँदै गइरहेको छ।
रोग प्रतिरोधात्मक क्षमता कमजोर भएका व्यक्तिहरूका लागि कृपया Centers for Disease Control and Prevention (CDC, रोग नियन्त्रण तथा रोकथाम केन्द्र) बाट जारी गरिएका दिशानिर्देशहरू समीक्षा गर्नुहोस् वा DOH वेबसाइटमा हेर्नुहोस् ।
कोभिड-19 विरुद्धको खोपको अतिरिक्त डोज ककसले लगाउनु पर्छ?
तपाईंले लगाउनुभएको खोप…
कसले बुस्टर डोज लगाउनु पर्छ
बुस्टर डोज कहिले लगाउनु पर्छ
कुन खोपको बुस्टर डोज लगाउनु पर्छ
के म दोस्रो बुस्टर डोज लगाउन सक्छु ?
5 वर्ष वा सोभन्दा बढी उमेरका मान्छेहरू यो खोपको पूरा डोज लगाएको मितिबाट कम्तीमा5महिनापछि
Pfizer वा Moderna खोप लगाउन सिफारिस गरिन्छ*
17 वर्ष वा सोभन्दा कम उमेरका मान्छेहरूले Pfizer खोप मात्र लगाउन पाउँछन्
18 वर्ष वा सोभन्दा बढी उमेरका मान्छेहरू यो खोपको पूरा डोज लगाएको मितिबाट कम्तीमा5महिनापछि Pfizer वा Moderna खोप लगाउन सिफारिस गरिन्छ* 50 वर्षभन्दा बढी उमेरका व्यक्ति र रोग प्रतिरोधात्मक क्षमता कमजोर भएका केही निश्चित व्यक्तिहरूले (अङ्ग्रेजीमा उपलब्ध छ) अब पहिलो बुस्टर डोज लगाएको कम्तीमा4महिनापछि कोभिड-19 विरुद्धको mRNA खोपको अतिरिक्त बुस्टर डोज लगाउन सक्ने छन्।
18 वर्ष वा सोभन्दा बढी उमेरका मान्छेहरू यो खोपको पूरा डोज लगाएको मितिबाट कम्तीमा2महिनापछि Pfizer वा Moderna खोप लगाउन सिफारिस गरिन्छ*
Johnson & Johnson को Janssen कोभिड-19 खोप को प्रारम्भिक डोज र बुस्टर डोज लगाएको कम्तीमा4महिना पूरा भइसकेका वयस्क व्यक्तिहरू अब कोभिड-19 विरुद्धको mRNA खोप प्रयोग गरी दोस्रो बुस्टर डोज लगाउन सक्छन्।
*mRNA खोप लगाउन सिफारिस गरिन्छ, तर तपाईं अर्को खोप लगाउन सक्नुहुन्न वा इच्छुक हुनुहुन्न भने चाहिँ तपाईं कोभिड-19 विरुद्धको Johnson & Johnson खोप लगाउन सक्नुहुन्छ ।
बुस्टर डोज लगाउन किन जरुरी छ?
बुस्टर डोजहरूले गम्भीर कोभिड-19 हुने उच्च जोखिम भएका मान्छेहरूलाई कोभिड-19 का कारण सिकिस्त बिरामी पर्नबाट जोगाइराख्न मद्दत गर्छन् । यसअघि गम्भीर कोभिड-19 हुने उच्च जोखिम भएका मान्छेहरूलाई मात्र बुस्टर डोज लगाउन सिफारिस गरिएको थियो तर सन् को सुरुतिर उक्त सिफारिस विस्तार गरिएको छ । शरीरलाई कोभिड-19 विरुद्ध अझ बढी प्रतिरोधात्मक क्षमता विकास गर्न मद्दत गर्नका निम्ति हाल5वर्ष वा सोभन्दा बढी उमेरका सबै जनालाई बुस्टर डोज लगाउन सिफारिस गरिएको छ । अझ सङ्क्रामक भेरिएन्टहरूको सङ्ख्या बढ्न थालेको र संयुक्त राज्य अमेरिकाभर कोभिड-19 का बिरामीहरूको सङ्ख्या वृद्धि भएको अवस्थामा बुस्टर डोज लगाउन झनै जरुरी भएको छ ।
संयुक्त राज्य अमेरिकामा अनुमति प्राप्त वा स्वीकृत कोभिड-19 विरुद्धका खोपहरू विभिन्न भेरिएन्टविरुद्ध अझै पनि धेरै प्रभावकारी देखिएका छन् । तपाईंले खोप लगाउनुभएको छ भने भेरिएन्ट भाइरसको सङ्क्रमण भए पनि सिकिस्त बिरामी पर्ने, अस्पताल भर्ना हुनु पर्ने र कोभिड-19 का कारण मृत्यु हुने जोखिम धेरै कम हुन्छ । तैपनि, हालका खोपहरूले तपाईंको शरीरलाई प्रदान गर्ने प्रतिरोधात्मक क्षमता समयसँगै कमजोर हुँदै जान सक्छ । बुस्टर डोजले कोभिड-19 विरुद्ध शरीरको प्रतिरोधात्मक क्षमता बढाउँछ र तपाईंको शरीरको प्रतिरक्षा प्रणालीलाई बलियो बनाइराख्न मद्दत गर्छ ।
विशेष समूहहरूको लागि COVID-19 संसाधनहरू
बच्चा तथा युवाहरू
बालबालिकाका लागि बनाइएको कोभिड-19 विरुद्धखो खोपका बारेमा आमा/बुवा/अभिभावकले थाहा पाइराख्नु पर्ने कुराहरू (PDF)
COVID-19 खोप लगाए पछि Myocarditis: अभिभावक तथा युवा वयस्कहरूले के थाहा पाउनुपर्छ (PDF) (अङ्ग्रेजी मात्र)
बच्चा तथा युवाका लागि विशेष स्वास्थ्य स्याहारको आवश्यकता सहीतको खोपको जानकारी (PDF) (अङ्ग्रेजी मात्र)
स्तनपान गराईराखेका र/वा गर्भवती व्यक्तिहरू
COVID 19 खोपहरू र मेडिकल प्रदायकहरूको लागि प्रजनन स्वास्थ्य कुरा गर्ने बुँदाहरू (PDF) (अङ्ग्रेजी मात्र)
खोपको तथ्य – प्रजनन स्वास्थ्य FAQ
आप्रवासी तथा शरणार्थीहरूको लागि COVID-19 खोपहरूमा विश्वास गराउन छलफल गर्ने गाइड (PDF) (अङ्ग्रेजी मात्र)
सामान्य समस्या र तथ्यहरू (PDF) (अङ्ग्रेजी मात्र)
COVID-19 आप्रवासी समुदाय सदस्यहरूको (WA आप्रवासी एकता नेटनेटवर्क) को लागि तपाईंको अधिकार थाहा पाउनुहोस्) (अङ्ग्रेजी मात्र)
COVID-19 खोपको कार्य: Washington State Department of Health (अङ्ग्रेजीमा मात्र)
घरमा सीमित गर्नु र खोप लगाउनु पर्छ? (PDF)
अतिरिक्त सामुदायिक विशेष संसाधनहरूलाई भ्याक्सिन इक्विटी एण्ड इन्गेजमेन्ट पेज (अङ्ग्रेजीमा मात्र) मा फेला पार्न सकिन्छ
मेरो प्रश्नको यहाँ उत्तर दिइएको छैन। मैले कसरी थप पत्ता लगाउने?
सामान्य प्रशनहरू covid.vaccine@doh.wa.gov मा पठाउन सकिन्छ।